के तपाई पानी पिउँदा गल्ती गरिरहनु भएको त छैन ? – NawalpurTimes.com
के तपाई पानी पिउँदा गल्ती गरिरहनु भएको त छैन ?
प्रकाशित : २०७७ वैशाख २० गते १५:२६
पानी अत्यावश्यक चिज हो । के तपाई पानी पिउँदा गल्ती गरिरहनु त भएको छैन ? पानी पिउनु सबैको लागि सामान्य कुरा भएपनि पानी पिउने एक तरिका हुन्छ ।
पानी पिउँदा शरीरमा हाइड्रेटेडको मात्रा धेरै रहन्छ । सही तरिकाले धेरै रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ । तर, यदि तपाईंले पानी गलत तरिकाले पिउनु भयो भने यसबाट तपाईंले धेरै नोक्सानी पनि ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले दिनको ८ लिटरसम्म पानी पिउनुपर्छ । यसका लागि यसरी अपनाउनुस् पानी पिउने तरिका।
२. खाना खाएलगतै वा खाना खानु केही समयअघि पानी पिउनुहुँदैन। यसले शरीरको पाचनरसलाई असर गर्छ र कब्जियत ,अपच जस्ता समस्याहरु देखापर्नसक्छ । खाना खाएको दुईघण्टापछि पानी पिउनु स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
४. बिहान शौचालय जानुअघि पानी खानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । धेरै चिसो पानी शरीरमा पचाउन गाह्रो हुने र तातो पानी चाँडै पच्ने गर्छ । त्यसैले विरामीलाई तातो पानी खुवाउनु पर्छ ।